Hindise: Cilmiga gaashaandhiga ha lagu barto dugsiyada sare - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Hindise: Cilmiga gaashaandhiga ha lagu barto dugsiyada sare
La daabacay fredag 14 november 2014 kl 10.17
Cilmiga gaashaandhiga oo lagu dhigto dugsiyada sare ee dalka iyo maalin loo qoondeeyo maalinta difaaca ee dhamaan dadka da’doodu tahay 18-jir. Dawlada ayaa ku soo bandhigaysa labadan hindise maanta, ka dib baadhitan ay samaysay. Si ay u soo jiidato dad badan loona helo dad badan uu ku shaqeeya mihnada askarinimo
Baadhitaanka dawliga ah ayaa soo jeedinaya in xiisad la xidhiidha arrimaha gaashaandhiga laga hirgeliyo dugsiyada sare iyo in wasaarada gaashaandhigu ay bixiso waxbarasho dheeri ah, ka dib shaqada qaranka.
Tan iyo markii laga soo wareegay markii meesha laga saaray shaqadii ciidanka qaranka ee khasabka ahayd, oo ahayd mid ku waajibtay dhamaan dadka da’doodu u dhaxayso 18 –jir ilaa 47-jir ayaa wasaarada gaashaandhiga ee Sweden waxaa la soo deristay ciidan la’aan. Waxaana adkaatay in la qoro askar sidoo kalena dad badan ayaa iskaga tegay cilmiga barashada gaashaandhiga.
Sida laga soo xiganayo saadaasha wasaarada gaashaandhiga waxay qaadanaysa ku dhawaad 10 sanno ilaa inta laga shaqaalaysiinayo tirada ugu badan, ciidanka hadda shaqaalaysiisan waqtiga gaaban iyo badmaxayaasha ayaa la siin shaqo dhamaystiran.
Arrimaha la xidhiidha in la helo gaashaandhiga awood badan ayaa doodiisu socotay muddooyinkii u dambeeyay, middan oo ay sababtay xaalada siyaasadda amni ee gobolka.
Dawlada weynaha Ruushka ayaa daandaansi xasarad badan ka bilawday meelo ku dhow Sweden, sidoo kale, waxaa cad in aanay Sweden lahayn awood ay isku difaacdo.
Sidaa waxaa bogga dooda ee jariirada Dagens Nyheter ku qoray Stefan Ryding-Berg oo ahaa hogaamiye sharciyeed ka hawl geli jiray wasaarada difaaca, haddana ah baadhaha dawlada u qaabilsan umuurtan.